Ibsa Ejjannoo lakk. 2
Waamicha qabsoo Gumii Paarlaamaa Oromoo irraa ummataa fi dhaabbiilee siyaasaa Oromoo maraaf dhihaate.
Haalli siyaasaa yeroo ammaa Godinaa Gaanfa Afriikaa addatti ammoo Itophiyaa keessatti mul’ataa jiru lammii fi dhaabbiileen siyaasaa Oromoo hundi ilaalcha gahaa kennuufiin qabsoon bilisummaa Oromoo bakka isaaf malu akka argatu gochuu irratti akka hojjatan kan gaafatu dha. Mirgi seeraa fi uumaa ummatni Oromoo qabu akka hin kabajamne dabrees roorroo fi cunqursaan irra gahaa jiru akka hin dhaga’amne shirri hojjatamaa jiru ol aanaa dha. Haala ulfaataa wayta ammaa mul’ataa jiru kanas kan jijjiiruu qabu dhaaba tokko ykn murna murtaawaa miti. Dirqamaa fi gaafatama lammii Oromoo fi dhaabbiilee siyaasaa Oromoo hundaa ti. Haalli a mul’ataa jiru kun egeree ummata Oromoof jecha yaadaa fi murtee wol fakkaataa tokko qabannee akka sossoonu kan gaafatu tahuu kanneen bilisummaa ummata Oromoof qabsoofna jennu hundi hubatuu qabna.
Gaaffii siyaasaa bu’uraa irraa fagaataa rakkoo yeroo irratti xiyyeeffatuun rakkoo jiru boriif dabarsuu yoo tahe malee biyyattii dhibdee keessaa hin baasu. Har’as taanaan Itophiyaan “Volcano” yeroo kamiyyuu dhohuu danda’u irra teessee kan jirtu tahuu hubachiisuu feena. Murni aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfatee jirus kan
gaafatamni itti hin dhaga’amnee fi dantaa ummatootaa dursuu irra dantaa murnaa tiksuu irratti bobba’e tahuu irraa biyyattii gara jeequmsa hin barbaachifnee fi eenyuuf illee bu’aa hin argamsiifnetti oofaa akka jiru haa hubatamu jenna. Hundaan olitti ammoo gaaffiin siyaasaa ummata Oromoo hanga deebii quubsaa fi amansiisa hin arganetti biyyattii keessatti hafnaan godinaan keessa jirru keessatti nagaa argamsiisuun akka hin danda’amne hubatamuu qaba.
Farreen ummataa garaa garummaa xixiqqaa hawaasa kamiyyuu keessa jiru Oromoo keessattis mul’atu akka waan haaraa tahettii fi hin jirreetti guddisanii dhiheessuun hamilee ummataa cabsuuf itti gargaaraman. Kanaaf qaawwaa diinni ittiin nu dadhabsiisee qabsoo ummata keenyaa laaffisuuf jedhu kanatti furmaata gochuuf dhaabbiileen siyaasaa, beektotni, maanguddoo fi hayyoonni Oromoo daddaffiin wol gahuun marii adeemsisuu akka qaban Gumiin Paarlaamaa Oromoo waamicha isaa dhiheessa. Kun dhugoomuun firaa fi diina keenya adda baasuun fuula tokkoon hiriiruuf gargaaraa dha. Waan taheef gidiraa ummatni keenya keessa jiru dhabamsiisuu fi qabsoo bilisummaa deemsifamaa jirutti firii gochuuf yaada kana deggeruun dhugoomuu isaatiif hundinuu kan irraa eegamu akka gumaachu waamicha hatattamaa kana dhiheessina.
Gumiin Paarlaamaa Oromoo haala yaaddessaa fi sodachisaa as adeemaa jiru qolatuuf haqa mul’ataa kana ummatootaa fi hawaasa addunyaa caalaatti hubachiisuuf kanneen dhimmi ilaalu gidduutti maree adeemsisuun barbaachisaa tahuutti amana. Maree egeree ummata Oromoof barbaachisaa tahe kanaan murtii tokko irra gahuuf ammoo fedhii ummata keenyaa irratti hundaa’uu fi haala addunyaa wayta ammaa xiinxaluu feesisa.
Waan taheef dhimma fardii tahe kana milkeessuuf Gumiin Paarlaamaa Oromoo dhimma kana gadi faginaan eerga ilaaleen booda waamicha armaan gadii kana dhiheessa.
1.Ummata Oromoo hundaaf :
Mootummootni Itophiyaa irratti aangoman hundi mirga ummata Oromoo kabajanii kabajsiisuu irratti isaanii hojjatan hin mul’atne. Kana irraas murna hawaasaa adda addaa addatti ammoo qotee bulaa wayyaba tahee tooftaa fi imaammata adda addaa irratti baasuun akka deega keessaa hin baane taasisan. Mirga isaa dhiitaa qalbiin cabee akka jiraatu dirqisiisaa yoona gahan. Mootummoota Itophiyaa jalatti hireen daldalaa Oromoo mudataa turee fi jiru kan isa hojjachiisee jiruu fi jireenya isaa ittiin mohatu osoo hin taane kan daldalaa irraa isa fageessee fi dorgommii keessaa ala isa taasise dha.
Hojjataan Oromoos taanaan ulaagaa dhaloota irratti hundaa’een kan bakka isaaf malu dhabee dararamaa jiru dha. Abdiin barataa Oromoos dukkanaawaa malee abdachiisaa tahee hin beeku. Waan taheef murnootni hawaasaa kunneen, furmaatni rakkoolee nu mudatanii qabsoon malee kan hin guutamne tahuu hubatuu dhaan dhaabbiilee siyaasaa bilisummaa keenyaaf qabsaawan hundaan olitti dantaa keenya dursan cinaa hiriiruun qooda qabsoo irraa eegamu akka gumaachitan, akkasumas maree dhibdee Oromoo furuuf akeekameef qooda irraa eegamu akka gumaachan waamicha goonaaf.
2.Lammii Oromoo biyya alaatti argamtan:
Dhiibbaa fi roorro mootummaa Itophiyaa irraa biyya keessan keessa nagaan jiraachuu dadhabuu irraa alatti baatan, dararama ummata keenya irra gahaa jiru kana hambisuuf qabsoon murteessaa tahuu hubatuu dhaan jireenya ofii irra kan ummata keessaniif dursa kennuun qabsoo adeemsifamaa jiru finiinsuuf tumsa isin irraa eegamu akka gumaachitan waamicha Oromummaa isiniif dabarsaa yaada dhiheessine irratti akka nu tumsitan gaafatna.
3.Qabsaawota bilisummaa falmaa irra jirtaniif:
Yeroo ammaa kana dirqama ulfaataa ofitti fudhatuun diinaan wal qabaa wareegama lubbuu kafalaa jirtaniin diina sarduun seenaa boonsaa galmeessaa akka jirtan ni beekama. Falmaa itti jirtan kan caalaatti finiinsuu dandeessan deggersaa fi tumsa ummata keenyaan tahuu yaadachiisaa , kan barbaachisu hundaan isin cinaa dhaabatuun gaafatama nurra jiru tahuutti hubanna. Isin woliin dhaabbatuun gaafatama seenaa nurra jiru bahuuf qophii tahuu mirkaneessaa falmaa irra jirtan karaa danda’ame maraan finiinsuu dhaan rakkoo Oromoo akka dhageessistan waamicha keenya dhiheessina.
4.Miseensota Mana Marii fi Caffee Oromiyaa keessatti qooda fudhataa jirtaniif:
Mootummaan Wayyaanee maqaa dimokraasiin waadaa guutuu hin dandeenye hawaasa addunyaa duratti seene faallessee gara bittaa abbaa irrummaa ifatti mul’atutti tarkaanfatuu eenyuun iyyuu olitti hubattan. Kana irraas jaarmootni siyaasaa karaa nagaa jijjiirama argamsiisna jechuun Heera sirnichaa jalatti qabsaa’uu murteeffatan mirga sosso’uu fi gurmeessuu dhorkatamuu irraa hidhaa keessa akka jiranitti of ilaalan. Kanneen sagalee ummataan bakka bu’aa ummataa tahuun keessan mirkaneeffames yaadaa fi fedhii ummata isin filatee dhageessisuu hin dandeenye. Dhiibbaan adda addaa isin irra jiraatu iyyuu rakkoo yeroo fi qabsoon furamu kanaaf jecha ummata bakka bu’oota kiyya jedhee isin filate dantaa bubuutuuf jecha osoo irraa hin gorre dantaa ummata isin filatee dura buusuun murannoon akka hojjatan, dhiibbaa ummata irra gahaa jiru akka saaxiltanii fi gurmuu Oromummaa akka jabeessitan, maree barbaachisus yaadaan akka gabbiftan waamicha keenya isinii dabarsina.
Rakkoo Godinaa kanaa addatti ammoo Itophiyaa keessatti guddinaa fi tasgabbii gufachiisaa jiru furuu keessatti barbaachisummaan qooda hawaasa addunyaa falamsiisaa hin tahu. Kanaaf osoo rakkoon siyaasaa ifatti mul’ataa jiruu, kanneen dhimmi ilaaluu fi nagaa fi sabatiinsa naannoo kanaaf barbaachisu argamsiisuu keessatti qooda murteessaa qaban jajjabeessuu fi woliin mari’atuu dhiisuun murna Heera ofiif tume cabsu, Seera addunyaa mallatteesse kabajuu diduun mirga namoomaa cabsaa jiru tumsuun seenaa duratti qaanfachiisaa fi gaafachiisaa tahuu hubachiisaa, mootummaan Wayyaanee daandii dimokraasii furmaata wolii galaa argamsiisutti akka deebi’uuf dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafatna.
Oromoon tokko, Kaayyoon keenyas tokko!
Bilisummaa Ummata Oromoof